तपाईको वेबसाइट एसईओ को लागि सर्वश्रेष्ठ बैकलिंक कहाँ खोज्नुहोस?
यदि तपाईं यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले जान्न सक्नुहुन्छ कि एक अनुकूलन अनुकूलन अभियान निर्माण गर्न एक राम्रो सामग्री सिर्जना गर्न र साइटमा त्रुटिहरू ठीक गर्न पर्याप्त छैन, तपाईले तपाइँको साइटलाई खोज निर्माणका लागि लिंक इमारत रणनीतिहरु को माध्यम ले पनि देख्न सक्दछ।. त्यहाँ धेरै भिन्न मापदण्डहरू छन् जुन तपाईले तपाइँको वेबसाइट एसईओ को लागि ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्दै खातामा लिनु पर्ने हुन्छ. सबैभन्दा पहिला, ब्याकलिङ्कहरू डोमेनमा तपाईले साइटमा आश्रित हुनुपर्दछ त्यहि देशमा होस्ट गरिएको छ जहाँ तपाइँ राम्रो स्थान रेट गर्न चाहानुहुन्छ. साथै, ब्याकलिङ्कहरू DA40-DA100 वेब पृष्ठहरूबाट आउन आवश्यक छ जुन तपाईंको बजार आला र उद्योगसँग सम्बन्धित हुन आवश्यक छ. यदि वेबसाइटमा एक उल्लेखनीय वेबपेज तपाईंको व्यापार विषयको सान्दर्भिक छ भने, यस पृष्ठबाट एक पछाडि उपयुक्त खोज र भरोसेमंद रूपमा खोज इन्जिन द्वारा मानिन्छ।. तपाईंको सबै ब्याकलिङ्कहरू स्वचालित रूपमा कुनै पनि लिपिहरू बिना म्यानुअल रूपमा सामग्रीमा राखिनुपर्छ. तपाईंले सजग राख्नु भएको छ कि स्वचालित रूपमा लिङ्कहरू Google द्वारा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ र भर्खरको Google पांडा अद्यावधिक अनुसार कडा दण्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ. Google वेबसाइटहरू र प्रयोगकर्ताहरू दुवै द्वारा प्रायः भ्रमण गरिएका वेबसाइटहरूमा ब्याकलिङ्कहरू राख्न यो उचित छ. यो मतलब छ कि तपाईं आफ्नो बजार आला मा नेताहरु संग सहयोग गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति मध्ये एक को आफ्नो साइट को लागि सबै भन्दा राम्रो संभव backlinks प्राप्त गर्न को लागि एसईओ. यसबाहेक, तपाईंलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ डेन्टेन्डिङ वा प्रतिबन्धित वेबसाइटहरूमा लिङ्कहरू निर्माण गर्नुहुन्न.
त्यसोभए, जब तपाईले माथि उल्लेख गर्नुभएको सबै उल्लिखित विचारहरू, तपाइँ सजिलै संग उत्तम स्रोतहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको व्यवसाय लक्ष्यहरू पूरा गर्दछ।. तपाइँलाई आवश्यक सबै छनौट यी चयन मापदण्डमा आधारित विस्तृत योजना सिर्जना गर्न हो. म केवल पेज वेबसाइट रैंक मा लिङ्क लिङ्क खरीद गर्न सिफारिस गर्दैन. यो Google एल्गोरिथ्म अब अपडेट गर्दै छैन र तपाईंलाई गैर यथार्थवादी नतिजा देखाउन सक्दछ. त्यहाँ धेरै लिङ्क निर्माण कारकहरू छन् जसले उच्च खोज इञ्जिन रेटिङ्हरूमा योगदान गर्दछ, त्यसैले यी मेट्रिक्समा मात्र लिङ्कहरू लिङ्कहरू तपाईंको लक्ष्यहरू पूरा गर्दैनन्।.
सान्दर्भिक स्रोतहरू चयन गर्नुहोस्
गुणस्तर र लक्षित लिंक प्राप्त गर्न तपाईंको वेबमा रस पृष्ठहरू, तपाइँलाई प्रासंगिक ब्याकलिङ्क पृष्ठहरूको लिङ्क खरीद गर्न आवश्यक छ. यी पृष्ठहरूसँग तपाइँको वेबसाइटको रूपमा त्यहि वा सम्बन्धित थिम छ र तपाईंको लक्षित बजारमा पुग्न उत्कृष्ट अवसर छ.
तपाईंको डोमेनको लागि सही ब्याकलिङ्क पृष्ठहरू फेला पार्न केहि फरक परिणामकारी तरिकाहरू छन्:
खोजशब्द वा खोजको लागि URL
यो तपाईंको सटीकको नतिजा प्रदान गर्दछ किनकि तपाइँ आफ्नो प्रकाशकको ​​साइटको सामग्री भित्र खोजशब्द खोज्नु हुन्छ. यसको अतिरिक्त, तपाई डोमेनको एक विशेष यूआरएलबाट खोजी गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो साइट लिङ्क राख्न चाहानुहुन्छ. यी खोजहरूले तपाइँलाई वेब पृष्ठहरू खोज्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको व्यापारको लागि अधिकतम रूपमा प्रासंगिक छ र यी स्रोतहरूबाट लिङ्कहरू प्राप्त गर्दछन्.
डोमेन नाम द्वारा खोज्नुहोस्
एसईओ को लागि उत्तम ब्याकलिंक प्राप्त गर्ने अर्को अवसर प्रासंगिक खोज विभिन्न डोमेन क्षेत्रहरूबाट वेब पृष्ठहरू. तपाईंले संकेत गर्न सक्नुहुनेछ कुन डोमेन क्षेत्रहरू तपाइँ हेर्दै हुनुहुन्छ र उत्तम-उपयुक्त संस्करणहरूको सूची प्राप्त गर्नुहोला. गुगलले जस्तै डोमेनहरूको मूल्यांकन गर्दछ. edu,. com. ,. gov किनभने तिनीहरू सामान्यतया गुणस्तर, विश्वसनीय छन् र प्रयोगकर्ताहरूलाई उचित जानकारी प्रदान गर्छन्. यसको मतलब यी डोमेनहरू बाट ब्याकलिङ्कले तपाईंलाई धेरै मूल्य ल्याउनेछ.
कोटिहरु को चयन गर्नुहोस
तपाईंले आफ्नो उद्योग संग सम्बन्धित व्यवसाय को एक वर्ग को चयन गरेर एक प्रासंगिक वेबसाइट मिलन सक्छ. यदि तपाईले वेब स्रोत विभिन्न निचाइहरूमा लागू हुन्छ भने तपाईले धेरै कोटीहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ. सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सान्दर्भिक वेबसाइटहरूमा पुग्नुहुन्छ. अन्यथा, उचित निर्माण लिंक निर्माण अभियान तपाईको साइट रेटिङ कम गर्न र एसईओ प्रयासहरू नष्ट गर्न सक्दछ Source .